budget စတေးရှောင်ခြင်း-၁ – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in shared information and tagged Expectation, individualism, Life, Prayer. Bookmark the permalink.
← စတေးနှင့် မလေး
budget စတေးရှောင်ခြင်း – ၂ →
4 thoughts on “budget စတေးရှောင်ခြင်း-၁”
MrDBA | June 15, 2009 at 8:28 pm
အင်း … အဲဒီလောက်တောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်နော်။ ပိုရင့်ကျက်သွားတာပေါ့ဗျာ။ အဲလိုမှတ်ပေါ့။
kom | June 15, 2009 at 8:39 pm
Boyz | June 15, 2009 at 9:00 pm
သူကလဲ ကိုရီးယားကား ကြည့်ဖူးတယ်လို့ မပြောရဘူး…။ အခန်းဆက်တွေနဲ့…။
ဖတ်တာ ဘာမှ မသိလိုက်ဘူး… တိကနဲ ဖြတ်လိုက်ပြီ…
ကုမ်ရာသီသူ | June 15, 2009 at 10:59 pm
ကိုကြီးဒီဘီ>> Workdone မဖြစ်ရင်တော့လည်း သုံးတဲ့အင်အား Infinity ဖြစ်တာပဲ အဖတ်တင်သဗျ။ Energy တော့ ထွက်လာပါရဲ့။ (အရင့်လွန်သွားတာ။ ပြုတ်လို့ မနူးတော့ဘူး။ အဲ… မွှားကုန်ပြီ)
အမကွမ်>> အခြားအခြားသော သူများရဲ့ ရင်သိမ့်တုန် စွန့်စားခန်းများက JB မှာ အပုံပါ ခင်ဗျာ။
ကဘွိုင်းဇ်>>အသက်ရှူဖို့ အားယူတာပါခည။ အားပြည့်ရင် ပြန်ဆက်မှာပါ။ ထိုင်းနယ်စပ်ရောက်တဲ့အထိ ပြန်ရပြီးမှ ပီနန်လမ်းကြောင်းကနေ မလေးကို ပြန်ဝင်ကြတဲ့ ၀ါရင့် `အို´တွေကိုကြည့်ပြီး အားတင်းခဲ့ရတဲ့အတွက် ခုလည်း အားပြန်တင်းနေတာပါ။